Falam – Travel Chin State
ဆူရ်ဘုန်လေဆိပ်တည်ရှိရာ တောင်ပေါ်မြို့လေး တစ်မြို့ဖြစ်သော ဖလမ်းမြို့သည် ဗြိတိသျှတို့မှ (၁၈၉၂ )ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ချင်းတောင်တန်း အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်စဉ်တွင် အရေးပါသော မြို့လေး တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တိုင် ဖလမ်းမြို့ရှိ အဆောက်အအုံများသည်လည်း ဗြိတိန် လူမျိုးများ၏နေထိုင်မှုပုံစံများကိုထင်ဟပ်စေပြီးလှပသောကိုလိုနီအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံများ၊ မြို့လယ်ရှိ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ တောင်ပေါ်တွင် ကစ်သလစ်ဘုရားကျောင်း နှင့် လွတ်လပ်ရေးစေတီတော်၊ ဖလမ်းမြို့‌ဈေး၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနှင့် တရုတ်ဘုံကျောင်း၊ လိုင်လွန်းဂူ၊ တာရွှန်းအမွေအနှစ် ဗိုလ်ကြွန်ဘိခ်ကျေးရွာစသည့်နေရာများဖြင့် လည်ပတ်စရာ စုံလင်လှပါသည်။ ထို့အပြင် ဖလမ်းမြို့မှခရီးဆက်မည်ဆိုပါက လဲင်သဲကျေးရွာနှင့်လဲင်သဲ‌မြေအိုးလုပ်ငန်း ၊ အသည်းပုံ ရိဒ်ရေကန်သို့လည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
Tho tha maw
[ Tho hta maw ]
[ Swun hta ]
Na Sun tha maw
[ Na Swun hta maw ]
[ Maang hta ]
Na ei zo maw?
[ Na aiy zo maw ]
Hi mi hi ziang zat si?
[ Hi mi hi ziang zat si ]
In bawm thei pei maw?
[ In bawm htei pey maw ]
In ngai thiam aw
[ In ngai htiam aw ]
[ Ka lung oy ]
ချစ်စရာကောင်းသော၊ ဒဏ္ဍာရီများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့် အသည်းနှလုံးပုံစံရှိသော ရိဒ်ရေကန်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြား၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်း၊ ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၈၅၃ မီတာအထက်တွင် တည်ရှိသော ရေကန်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အခမ်းနားဆုံးနှင့် အလှပဆုံး ရေကန် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရေကန်၏ အကျယ်အဝန်းအနေဖြင့် အရှည် (၁) မိုင်ခန့်ရှိပြီး အနံ (၁/၂) မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း အကျယ်အဝန်းအနေဖြင့် (၃) မိုင်ခန့် ရှိပါသည်။ ရေကန်၏ အနက်မှာ ၆၀ ပေကျော်ရှိပါသည်။ ဖလမ်းမြို့မှ ၆၃ မိုင်အကွာနှင့် တီးတိန်မြို့မှ ၃၂ မိုင် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး မော်တော်ယာဉ် ဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက်နယ်စပ်ဂိတ် ( ဇိုခေါထာရ်-ရိခေါ်ဒါရ်) အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ဂိတ်အဖြစ် ( ၈.၈.၂၀၁၈ )ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နယ်စပ်ဂိတ်သည် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ အဓိက ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက်ဂိတ်ဖြစ်ပါသည်။ ရိဒ်ဒေသနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ချင်းပြည်နယ် ဒေသဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် ရိခေါ်ဒါရ်မြို့ခရီးစဉ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဉက္ကဌတို့အား ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်
၀၉ ၇၉၅ ၆၃၂ ၂၂၀ (အဖွဲ့ဝင်၊ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီ )
၀၉ ၇၇၉ ၈၄၂ ၄၂၀ ( ဉက္ကဌ၊ ခရီးစဉ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ )
ဖလမ်းမြို့၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသော လိုင်းလွန်ဂူသည် ဖလမ်းမြို့မှ ၅ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၃၅၀၀-၄၅၀၀ ကြားတွင် တည်ရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်၊ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မိနစ် ( ၂၀)၊ ခြေလျင်ဖြင့် ( ၁ ) နာရီခန့်အချိန်ယူ၍ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းလိုင်လွန်ဂူကို သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဆိုပါက သမိုင်းဝင်သည့် နေရာများ ဖြစ်ကြသော ဒေသခံများမှ “ချင်းလူမျိုးများ၏ဇာတိရပ်မြေ” ဟုလည်းခေါ်ဆိုကြသည့် ပေ( ၃၈၀) ထိနက်သော Lailun(လိုင်လွန်) ကျောက်ဂူ၊ ပေ(၅၀၀) ကျော်နက်သော Lungtial ကျောက်ဂူနှင့်၊ ရှေးယခင်က အဆိုပါ ဒေသရှိ ချင်းလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော Thlur ကျောက်တို့ကို သွားလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လိုင်လွန်းဂူအနီးတွင် The Chin Christian Institute of Theology (CCIT), Falam မှ “Lailun Integrated Development Centre” တည်ဆောက်၍ အဆင်ပြေချောမွေ့သော ခရီးစဉ်ဒေသအဖြစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ထားပြီး ထို Lailun Integrated Development Center တွင် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ညအိပ်အနားယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းစင်တာတွင် သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊ မိသားစုအလိုက် ညအိပ်အပန်းဖြေခြင်း၊ ချင်းအစားအစာများဖြစ်သည့် ဆာဗူသီး၊ နွားနောက်သားတို့အပြင် အော်ဂဲနစ် ခြံထွက်သီးနှံများ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ချက်ပြုစားသုံးနိုင်ခြင်းနှင့် လိုင်းလွန်ဂူအနီးရှိ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကိုလည်း လေ့လာဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
တာရွှန်းကျေးရွာသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့မှ (၃) မိုင် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ( ၁၅ ) ရာစုတွင် ကျေးရွာ တည်ခဲ့ကြသည်။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကို တော်လှန်ခဲ့သော ချင်းအမျိုးသား၊ ချင်းသူရဲကောင်း ဗိုလ်ကြွမ်ဘိခ်( ခ )ဗိုလ်ဆွန်ပက်၏ မွေးရပ်မြေအဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်း ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ကာ လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ကြပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ စိတ်ဝင်စားသော လှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့် ခြေလျင်တောင်တက်ခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်း လည်ပတ်ခြင်း၊ ချင်းရိုးရာဂျက်ခုတ်နည်း၊ ဝိုင်လုပ်နည်းများလေ့လာခြင်း၊ သာယာလှပ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကောင်းသော သဘာဝရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြတိုက်ကို လေ့လာခြင်း၊ ချင်းသူရဲကောင်းကြီး ဗိုလ်ကြွမ်ဘိခ်၏ အမှတ်အသားများဖြစ်သည့် အုတ်ဂူနှင့် ကျောက်တိုင်ကို လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ တာရွှန်းလူထု အခြေပြုခရီးသွား လုပ်ငန်းအား UK-Aid နှင့် The Backyard Travel and Tour Co.,ltd တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။
နာမည်ကျော် အသည်းပုံ ရိဒ်ရေကန် တည်ရှိရာ ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့မှ မိုင်(၂၀) ကျော်ခန့် ကွာဝေးသော ဘွာလ်နဲလ်တောင် (ခ) လဲန်နူးပါးတောင် Buannel @ Len Nupa သည် ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ်နှင့် တီးတိန်မြို့နယ် နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၈၂၂၆ပေမြင့်သော တောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘွာလ်နဲလ်တောင် (ခ) လဲန်နူးပါးတောင်သည် အထီးတောင် (apa) နှင့် အမတောင် (Len Nupa) (သို့မဟုတ်) နတ်သမီးတပါး လဲလျောင်းနေသလို ဟူ၍ ခွဲခြားတည်ရှိပါသည်။ ဘွာလ်နဲလ်တောင်၏ တောင်ရှင်မလေးထိန်းကျောင်းသော သားရဲတိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံတို့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ကျက်စားရာမြေဟု ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်များလည်းရှိသောတောင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဒီစားကျက်မြေမှာ(ကျောက်ထပ်) ကျောက်ပြားများတခုနှင့် တခုထပ်နေတာတွေရှိပြီး စမ်းသပ်ကြည့်လိုသူများအနေဖြင့် ဒီကျောက် ထပ်တွေကို အမှတ်အသားထားကာ တခုခုနဲ့ခွဲပြီးအဝေးတနေရာမှာထားလိုက်မည်ဆိုလျှင် များမကြာမီ ပြန်ရောက်နေပြီးသွားပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ထပ်လျက် ပြန်တွေ့ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်။ တောင်ပေါ်ရှိ စားကျက်မြေသည် ချင်းသီချင်းစာ၊ ကဗျာများတွင် ပါဝင်သော နေရာတခုဖြစ်ပြီး ရှေးဘိုးဘွားများ၏ မူလဖြစ်တည်ရာ နေရာဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဘွာလ်နဲလ်တောင် (ခ) လဲန်နူးပါးတောင်သည် ရောင်သွေးစုံလင်ချင်းတို့မြေမှ အထင်ကရနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ တောင်ပေါ်တွင် ကျေးငှက်ကလေးများ ဝဲပျံတွန်ကျူးများနှင့် အနီးအနား ပျံသန်းဝဲနေမှုကို မြင်တွေ့ရခြင်း၊ နွားနောက် စားကျက်မြေအား မြင်တွေ့ရခြင်း၊ သဘာဝ အအေးဓာတ်ကို ရရှိခံစားခြင်း၊ မျက်စိပသာဒအလွန်ကောင်းခြင်း၊ စိတ်တိုင်းကျ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ခွင့်ရခြင်း၊ မောပန်းသော်လည်း သစ်ပင်ကြီးများ အရိပ်ကြောင့် ခရီးသွားများ အမောခံနိုင်ခြင်း၊ ဒေသခံများမှ ချက်ပြုတ်ပေးထားသော ထမင်း/ဟင်းများအား အရသာရှိစွာ စားသုံးနိုင်ခြင်း၊ တစ်တောင်လုံး အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာ အစရှိသည့် တောင်ပေါ်ပန်းနှင့် တောင်ဇလပ်ပန်းတို့ဖြင့် ရာသီအလိုက်လှပစွာ ဝေဝေဆာဆာ ဖူးပွင့်နေကြပါသည်။ ကမ္ဘာမှာရှားပါးလှတဲ့ မျိုးစိတ်တခုဖြစ်တဲ့ လည်ပင်းဖြူလဒငှက်ကြီးမျိုးတွေ ရှင်သန်နေထိုင်ရာများထဲက တခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တောင်ပေါ်ရှိ မြက်ခင်းပြင်ကို တောင်ထိပ်ဖျား ၁၀လုံးက စက်ဝန်းပုံသဏ္ဍာန် ကာရံထားပြီး မြက်ခင်းအလယ်မှာ တောစမ်းချောင်းငယ်လေးတစ်ခု စီးဆင်းလျှက်ရှိသည်။ ၎င်း ချောင်းရေသည် ရှေးယခင် အမဲလိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသော တိရစ္ဆာန်များအတွက် ကုသနိုင်သော ဆေးဖက်ဝင် ရေဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ချောင်းရေထဲတွင် သစ်ရွက်များ၊ အမှိုက်များ ကျပါလျှင်လည်း ငှက်ကလေးများက ဆယ်ယူကြသည်။ ဘွာလ်နဲလ်တောင် (ခ) လဲန်နူးပါးတောင်သည် ဧပြီလ၊ မေလ၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလတို့တွင် လာရောက်လည်ပတ်ရန် အသင့်ဆုံးချိန်ဖြစ်ပြီး ဖလမ်းမြို့ (သို့မဟုတ်) တီးတိန်မြို့ မှတဆင့် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြင့် သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပြီး တောင်ခြေရှိမွန်လွှကျေးရွာနှင့် လမ်းပြများ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အစားအသောက်များ တည်ခင်းရေး ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ ကျေးရွာ၏ လူနေမှု ဓလေ့စရိုက်များနှင့် သဘာဝဝအလှတရားမျာ ခံစားလေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဇိန်မှုတောင် (Mt. Zing Hmuh) သည် ဖလမ်းမြို့၊ ဟားခါးမြို့နှင့်ထန်တလန်မြို့ကြားတွင် တည်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၈၁၄ ပေ ရှိပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တတိယ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝ သစ်ပင်ပန်းပင်များ၊ သစ်ခွပန်းများ၊ ကျေးငှက်များ၊ တိရစ္ဆာန်များ ပေါကြွယ်ဝသော တောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သီးမြစ် ၊ တီအိုင်ချောင်းမှတဆင့် မဏိပူရမြစ်နှင့်နောက်ဆုံးကုလားတန်မြစ်အဖြစ် ပေါထွန်းစေဖို့အတွက် မြစ်ဖျားခံသည့် ဒေသခံတို့၏ အမြတ်တနိုးတန်ဖို့ထားရာ လိုင်သီးလီ ( Lai Ti Li ) သဘာဝရေကန် တည်ရှိသော တောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဇိန်မှုတောင်သည် တောင်တက်ခြင်း၊ တောကြမ်း လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ သဘာဝအလှနှင့်အတူ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းများအား စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အသွားသင့်ဆုံး နေရာဖြစ်ပါသည်။ ဇိန်မှုတောင်သို့ ဖလမ်းမြို့၊ ဟားခါးမြို့နှင့်
ထန်တလန်မြို့ကနေ မော်တော်ယာဉ် (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။